दाङमा एउटै हाँगामा झु’ण्डिएर स्कुले केटाकेटीले किन गरे आ’त्मह’त्या ? « Postpati – News For All
दाङमा एउटै हाँगामा झु’ण्डिएर स्कुले केटाकेटीले किन गरे आ’त्मह’त्या ?
माघ २६, दाङ । दाङको घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. २ गंगामावि रामपुरमा अध्यनरत एक केटा र केटीले एउटै हाँगामा झु’ण्डिएर आ’त्मह’त्या गरेका छन् ।
कक्षा ९ मा अध्यनरत १८ बर्षीय प्रदिप चौधरी र कक्षा ११ मा अध्यनरत १७ बर्षीया दीपा चौधरीले माघ २४ गते विहान गाउँकै बल्लामपुरस्थित बरको रुखको एउटै हाँगामा झु’ण्डिएर आ’त्मह’त्या गरेको अवस्थामा फेला पर्दा सारा गाउँले नै स्त’व्ध बने । विद्यालयका दुई विद्यार्थी मृ’त्युको शो’क मनाउन शुक्रवार विद्यालय विदा गरियो । उनीहरुले २३ गते राति नै त्यसरी आ’त्मह’त्या गरेको आशंका प्रहरीको छ ।
त्यो दृष्य देख्ने वडा अध्यक्ष केशव आचार्य लगाएत सबै गाउँलेका आँखा रसाए । ‘लाउलाउँ र खाउँ खाउँ भन्ने उमेरका केटा केटी संगै झु’ण्डिएर आ’त्मह’त्या गरेको देख्दा कस्को पो मन रुँ’दैन र,’ वडा अध्यक्षले भने ‘एउटै चुन्नी च्या’तेर एउटै हाँ’गामा झु’ण्डिएर आ’त्मह’त्या गरेको त्यो हृ’दयवि’दारक घटनाले सारा गाउँले स्त’व्ध छन्।’
प्रदिप र दीपा एउटै घर परिवार भित्रका सदस्य हुन । उनीहरुका बाजे दुई दाजुभाई फाटेका । प्रदिप गत वर्ष मात्रै स्थानीय नव चेतना वोर्डिङवाट गंगामाविमा कक्षा ९ मा भर्ना हुन गएका हुन । ‘उनीहरुको मृ’त्यु पछाडि हा’डना’ता भित्रकै माया प्रेम भन्ने अनुमान भइरहेको छ,’ वडा अध्यक्ष आचार्यले थपे ‘केटाकेटी दुबै एउटै परिवारको भएको हुँदा स्वी’कारदैनन् भन्ने सोचले आ’त्मह’त्या गरेको भन्ने अनुमान छ।’ उनीहरु बीचमा माया प्रेमको कुरा अभिभावकलाई पनि थाहा भएन । एउटै परिवार भित्रै त्यो शंका गर्ने कुरापनि हुन्न । समयमै थाहा पाएका भए अभिभावकले संझाउँथे होला ।
बल्लामपुरकै त्यही बरेको रुखको त्यही हाँगामा र त्यही विद्यालयमा अध्यन गर्ने सोही गाउँकै १८ बर्षीया किशोरी छोपन्या चौधरीले केही वर्ष पहिले झु’ण्डिएर आ’त्मह’त्या गरेकी थिइन ।
गंगा मावि रामपुरमा कक्षा ७ मा अध्यन गर्ने १५ बर्षीया डेली कँवर र कक्षा १० मा अध्यन गर्ने १७ बर्षीय रितेश कँवरले पनि गत कात्तिक २२ गते संगै वि’षा’दी से’वन गरेर आ’त्मह’त्या गरे ।
विद्यालयका प्रधानाध्यापक शषिधर उपाध्यायले उनीहरु दुबै जनाले डेलीको घरमा को’काको’लामा स’ल्फा’स नामक वि’षादी मिलाएर खाएर आ’त्मह’त्या गरेको भन्ने पो’ष्टमा’र्टम रिपोर्टमा देखिएको जानकारी दिए । डेलीको घ’टना’स्थ’लमै कात्तिक २२ गते शुक्रवार नै मृ’त्यु भएको थियो भने रितेशको २३ गते बाँकेको कोहलपुरस्थित मेडिकल कलेजमा नि’धन भएपछि विद्यालयले २४ गते शो’कमा विद्यालय वन्द गरेको थियो ।
कँवर द्धयले आ’त्मह’त्या गर्नुको कारणपनि सानै उमेरमा नबुझेरै गरेको ‘प्रेमको च’क्कर’नै मान्ने गरिएको छ । डेली घोराही २ भट्टेटारकै हुन भने रितेश बंगलाचुली गाउँपालिकावाट पढ्नका मामाको घरमा बस्दै आएका थिए । मृ’तक कँवर द्धयको बीचमा पनि आपसमा नाता गोता पर्ने थियो ।
‘अस्ति म’रेका चौधरीद्धय जत्तिकै नजिकको नाता त हैन, तर उनीहरुका बीचमा पनि अलि टाढाको भएपनि नाता पर्ने हुन भन्ने खुलेको छ,’ प्रअ उपाध्यायाले भने ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय घोराही दाङमा मु’द्दा फाँ’टमा कार्यरत प्रहरी नायव निरिक्षक निर्मल खत्री अनुसार वितेको १० महिनामा जिल्लामा १४९ जनाले आ’त्मह’त्या गरेका छन् । ८६ जनाले झु’ण्डि’एर र ६३ जनाले विषादी सेवन गरेर आ’त्मह’त्या गरेको खत्रीले बताए ।
न्यूनिकरण गर्न के गर्न सकिन्छ ?
ड’र लाग्दो गरि बढी रहेको आ’त्मह’त्याको कारण जान्न खोज्दा विद्यालयका प्रधानाध्यापक उपाध्यायले मोवाइल, सामाजिक सञ्जाल लगाएका चिज बस्तुलाई सही रुपमा सदुपयोग नगर्नुको परिनाम मान्न सकिने अथ्याए । ‘प्रविधिको गलत प्रयोगले वि’कृति नि’म्त्याएको छ,’ उपाध्यायले भने ‘अभिभावलके पनि यसमा अलि सावधानी अपनाउन आवश्यक छ।’
दाङका प्रहरी प्रमुख जनक भट्टराईपनि प्रधानाध्यापकको कुरासंग सहमत छन् । तर उनले जनचेतना फैलाउन नसक्नुले आ’त्म’ह’त्या बढेको तर्क गरे । गाउँ घरमा जनचेतना फैलाउन स्थानीय सरकार, अनलाईन मिडिया र रेडियोले थप भूमिका खेल्नुपर्ने उनले तर्क गरे । एसपी भट्टराईले भने–‘सामाजिक वि’कृति रोक्न स्थानीय सरकार मिडिया फोकस हुनुपर्छ।’
प्रेममा धो’का वा असफल हुनु तथा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कारणहरुले गर्दापनि समाजमा आ’त्मह’त्याको दर ड’रला’ग्दो गरि बढ्दै गएको उनले तर्क गरे ।
राप्ती स्वास्थय विज्ञान प्रतिष्ठान घोराही दाङमा कार्यकरत म’नोचि’कि’त्सक सु’नय’ना यादवपनि आ’त्मह’त्याको प्रमुख कारण सचेतनालाई मान्न सकिने बताउँछिन् । यादवले भनिन्–‘आ’त्मह’त्याका धेरै कारण हुन्छन्, तर, प्रमुख कारण अवरनेस नै हो।’
मा’नसि’क रोग तथा डि’प्रेस’नको उपचार संभव रहेको मनो’चिकि’त्सक यादवले बताइन । ‘डि’प्रे’सन लुकाएर राख्नु ग’लत हो,’ यादवले भनिन् ‘ समयमै उपचार गर्न पाए त्यो रोक्न सकिन्छ र मानिसको ज्या’न बचाउन सकिन्छ।’
युवा युवतीले लागु औ’ष’धको से’वन, प्रेममा असफलताका कारण बढी आ’त्मह’त्या गर्ने गरेको पाइएपनि त्यो पनि एउटा डि’प्रे’सनकै परिनामले हुने उनको तर्क छ । ‘यदी बच्चा र बृ’द्धले आ’त्मह’त्या गर्छ भने एक्लोपनि बढी कारक हुन सक्छ र त्योपनि डि’प्रे’सनकै कारणले हुन्छ,’ यादवले भनिन् । जस्ले जसरी आ’त्मह’त्या गर्ने गरेता पनि त्यसको मुल कारण डि’प्रे’सन जस्ता रो’गहरु लुकाएर राख्नुको परिनाम भएको उनले दोह¥याइन ।
२०७६ माघ २६,आईतवार को दिन प्रकाशित